Voasoratra anarana ao amin'ny bokin'ny fiainana
“Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin’ny bokin’ny fiainana tokoa Aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan’ny Raiko sy eo anatrehan’ny anjeliny. Apôk. 3:5
Ny fitenenana hoe “izay maharesy” dia manondro fa misy zavatra tsy maintsy resen’ny tsirairay avy amintsika. Izay maharesy dia hampiakanjona ny akanjo fotsin’ny fahamarinan’i Kristy, ary soratana ho azy ny teny hoe: “ary tsy hamono ny anarany eo aminn’y bokin’ny fiainana tokoa Aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan’ny Raiko sy eo anatrehan’ny anjeliny”. Endrey! Tombontsoa lehibe manao ahoana izany maharesy izany, sy ny manana ny anarantsika asehon’Ilay Mpamonjy eo anatrehan’ny Ray! Koa satria naharesy, rehefa “hitafy lamba fotsy” isika, dia hanaiky ny finoantsika ho marina, toy ny an’ireo kristianina tamin’ny fiangonana voalohany, ny Tompo. Hanaiky “ireo olona vitsy aty aminao aty Sardisy” izay “tsy nandoto ny fitafiany” (Apok. 3:4); handeha hiaraka Aminy isika, manao akanjo fotsy, satria tamin’ny alalan’ny fanatitra fanonerana nataony no niantsoana antsika ho mendrika.
Ry havana malala, eo am-pahitana teny fikasana mampahery toy izany, hatraiza no tokony hahavonona antsika hiezaka ny hahatanteraka ny toetrantsika mba hahafahantsika mitsangana eo anatrehan’ny Zanak’Andriamanitra. Ireo izay manao ny akanjom-pahamarinany ihany no hahazaka ny voninahitry ny fahatrehany, rehefa hiseho “amin-kery sy voninahitra lehibe” Izy.
Zava-dehibe tokoa izany maharesy izany. Tsy maintsy toherina mafy avokoa ny sakantsakana sy ny asa ratsin’ny devoly. Mila miambina isika amin’ny fotoana rehetra, tsy tokony hiala amin’ny fibanjinana an’i Kristy mihitsy isika na dia fotoana fohy aza, sy ny heriny izay hany hamonjy antsika amin’ny fotoan’ny fitsapana. Tsy maintsy mitantana ny tanany isika, mba hahatonga antsika ho voatohan’ny heriny tsy hay tohaina.
Hoy Ilay Vavolombelona Marina: “indro, efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao” and. 8. Andeha hisaotra an’Andriamanitra amin’ny fo sy ny fanahy ary ny feo, ka hianatra hanatona Azy toy ny eo amin’ny varavarana mivoha, amin’ny finoana fa afaka manatona maimaim-poana miaraka amin’ny fangatahantsika isika, ary hihaino sy hamaly Izy. Amin’ny finoana velona amin’ny heriny izay hanampy no handraisantsika hery hiadiana ny adin’ny Tompo miaraka amin’ny fahazoana antoka fa hahazo fandresena.